Pakistan:- Nin Lagu Eedeeyay Inuu Gubay Bogag Ka Mid Ah Qur’aanka Kariimka Oo La Dilay – Bulsho News
Pakistan:- Nin Lagu Eedeeyay Inuu Gubay Bogag Ka Mid Ah...
Pakistan:- Nin Lagu Eedeeyay Inuu Gubay Bogag Ka Mid Ah Qur’aanka Kariimka Oo La Dilay
Kooxo hubeysan ayaa bartamaha Pakistan ku dilay nin lagu eedeeyay inuu gubay bogag ka mid ah Quraanka Kariimka, sida ay booliisku sheegeen, waa kiiskii ugu dambeeyay ee rabshado aflagaado ah oo ka dhacay dalkaasi.
Booliska ayaa sheegay in in ka badan 80 qof loo xiray dilka Sabtidii ka dhacay degmada Khanewal ee gobolka Punjab.
Wararka ayaa sheegaya in ninkan uu ku jiray gacanta booliska ka hor inta aysan dad badan ka kala bixin gacantooda. Meydkiisa ayaa lagu wareejiyay qoyskiisa, waxaana aas loo sameeyay Axadii.
Raysal wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa sheegay in kiiskan “loo cuskan doono sharciga” wuxuuna codsaday in warbixin laga siiyo saraakiisha booliiska ee lagu eedeeyay inay ku guul-darreysteen waajibaadkoodii ahaa badbaadinta ninkaas. Waxa uu sheegay in dowladdiisu, aysan “wax dulqaad ah u lahayn qof kasta oo sharciga gacmihiisa ku qaata”.
Munawar Husseen oo ka mid ah saraakiisha booliiska ayaa sheegay in ciidamada ay u yimaadeen sidii ay u heli lahaayeen ninkan oo la sheegay in da’diisa lagu sheegay 40-sano jir, isagoo miyir daboolan oo geed ku xiran.
Khanewal waxay ku taal meel 275 kilomitir u jirta Lahore. “Dadka tuulada oo ku hubaysnaa budad, faashash iyo biro ayaa dilay, maydkiisana waxay ka soo laalaadiyeen geed,” ayuu Xuseen oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters.